Itoobiya, Kenya, Ruwanda, Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Suudaan iyo Ugandha Xilimaa la soo gaadhsiinayaa tallaalka COVID-19? – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Itoobiya, Kenya, Ruwanda, Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Suudaan iyo Ugandha Xilimaa la soo...
Itoobiya, Kenya, Ruwanda, Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Suudaan iyo Ugandha Xilimaa la soo gaadhsiinayaa tallaalka COVID-19?
Itoobiya, Kenya, Ruwanda, Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Suudaan iyo Ugandha ayaa dhammaantood loo qorsheeyay inay helaan tallaalka COVID-19 kahor dhammaadka bisha Febraayo.
Warbixin ay Arbacadii soo saareen COVAX iyo Ururka Caafimaadka Adduunka, Itoobiya waxay heli doontaa ku dhowaad sagaal milyan oo qiyaaso ah, tirada ugu badan ee qaadasho, sida ku xusan Nidaamka Liistada Adeegsiga Degdegga ah ee WHO.
Kenya waxay heli doontaa 4,176,000 oo qiyaas ah. Uganda waxaa la siiyaa 3,552,000 oo qiyaas ah, halka Rwanda la siin doono 996,000 qaadasho.
Soomaaliya waxay heli doontaa 1,224,000 halka Suudaan lagu wado inay hesho 3,396,000 oo qiyaaso ah halka 864,000 loo qaybin doono Koonfurta Suudaan.
COVAX waxay sheegtay inay hadda rajaynayso 1.2 milyan oo qiyaas oo ah tallaalka Pfizer-BioNTech ayaa laga heli doonaa Xarunta COVAX ee Q1 2021, iyadoo la raacayo dhammaystirka heshiisyo dheeri ah.
Waxaa sidoo kale lagu kabi doonaa mugga weyn ee tallaalka AstraZeneca / Oxford ee ay heli karto xarunta isla waqtigaas.
Qiyaaso dheeri ah oo ah qiyaasta tallaalka Pfizer-BioNTech ayaa la heli doonaa rubuca labaad iyo wixii ka dambeeya, heshiiskii iibsashada ee horay loo kala saxeexday ee u dhexeeya Gavi iyo Pfizer-BioNTech ilaa 40 milyan oo qiyaasood.
Waqtigaan la joogo, Tansaaniya waa waddanka kaliya ee gobolka aan amar ku bixin wax tallaal ah mana heli doono wax qeybinta bilowga ah.
Madaxweyne John Magufuli, oo isagu muddo dheer sheegaayey in Eebbe ka ciribtiray Tansaaniya COVID-19, toddobaadkii hore wuxuu caddeeyey in tallaallada loogu talagalay ay yihiin kuwo “aan habboonayn”
Isniintii, Wasiirka Caafimaadka Tansaaniya Dorothy Gwajima ayaa sharraxday in wasaaraddu aysan qorsheyneynin inay hesho tallaallo loogu talagalay COVID-19 iyo in tallaal kasta ay tahay inuu helo oggolaanshaha wasaaradda.
Wasiirka caafimaadka ayaa ku adkeystay in Tanzania ay nabad tahay.
Previous articleWasaaradda Beeraha DFS oo ku dhawaaqday xaalad deg deg ah
Next articleإثيوبيا وكينيا وأوغندا من بين دول مجموعة لتلقي COVID-19 لقاح بحلول نهاية فبراير
Warbixintii ugu danbeysey Itoobiya iyo Hal bukaan oo COVID19 u dhintey.